Thu, Jun 4, 2020 at 2:23am
काठमाडाैं, २१ जेठ । चलचित्र अभिनेत्री मनिषा कोइराला आज रुपन्देहीको सीमानाका भैरहवाको बेलहियाबाट नेपाल प्रवेश गरेकी छिन् । परिवारका सदस्यसहित बेलहिया नाकाबाट स्वदेश प्रवेश गरेपछि उनी काठमाडौं प्रस्थान गरेकी बताइएको छ । अभिनेत्री कोइरालासँगै निजी गाडीमा परिवारका सदस्यसमेत रहेको बताइएको छ । भारतीय भूमिबाट नेपाल प्रवेश गर्नु पहिले सीमामा स्वास्थ्यकर्मीले अभिनेत्री कोइराला र उनको परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । रुपन्देहीका..
मुम्बई, १८ जेठ।कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण संसारका विभिन्न देश झैं भारत पनि लकडाउनको स्थितीमा छ जसका कारण धेरै मानिसहरु आफ्नो घरभन्दा टाढा फसेका पनि छन् । यस्तो कठिन समयमा जोकोही पनि आफ्नो घर र परिवार भएठाउँ पुग्न चाहन्छन् । यसका लागि थुप्रै फिल्मी कलाकार मद्दतमा उत्रिएका छन् । यस्तै, थुप्रैलाई मद्दत गरिसकेका बलिउड नायक अक्षय कुमारले पनि आफ्नो बहिनी अल्का भाटिया..
काठमाडौं, १५ जेठ । कन्नड टेलिभिजनकी चर्चित अभिनेत्री मेबिना माइकलको २२ वर्षको उमेरमा मंगलबार बेलुकी सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । लोकप्रिय टिभी रियालिटी शो ‘प्याते हुडुगिर हाल्ली लाइफ’ की बिजेता मेबिनाको दुर्घटना नागमङ्गला तालुकको देवहल्लीमा भएको थियो । मेबिनाको मृत्युको खबरले उनको पूरा परिवारलाई ठूलो धक्का लागेको छ । उनी मंगलबार आफ्नो गृहनगर मडिकेरी गइरहेका बेला दुर्घटना भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्..
मुम्बई, १४ जेठ । टेलिभिजन कलाकार प्रेक्षा मेहताले सोमबार राती मध्यप्रदेशको इन्दोरस्थित आफ्नो घरमा आत्महत्या गरेकी छिन् । उनी २५ वर्षकी थिइन् । क्राइम पेट्रोलमार्फत् चर्चामा आएकी प्रेक्षालाई मंगलबार बिहान उनको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको हो । परिवारले उनलाई अस्पताल पुर्याए पनि डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रेक्षा लकडाउन अघि मुम्बईबाट इन्दोर गएकी थिइन् र उनी पछिल्लो समय..
मुम्बई, १३ जेठ । बलिउडका निर्माता तथा निर्देशक करण जौहरको घरमा काम गर्ने दुई जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । आफ्नो घरमा काम गर्ने दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि उनी आइसोलेसनमा बसेको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ । घरमा काम गर्नेलाई कोरोना देखिएपछि उनी १४ दिनको आइसोलेसनमा बसेका हुन् । कोरोना देखिएपछि उनको घरलाई स्यानिटाइज गरिएको जनाइएाके छ । त्यस्तै उनका परिवारका सबैको..
काठमाडौं, १२ जेठ । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा विचार नपु¥याई बोल्दा अभिनेत्री वर्षा राउत नराम्रोसँग विवादमा तानिएकी छन् । सम्पूर्ण नेपालीले अतिक्रमणको विरोध गरिरहेका बेला उनले एउटा भिडियो अन्तर्वार्तामा आफ्ना भारतीय साथी रिसाउँछन् भन्दै त्यो विषयमा मिडियाले बोल्नु नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ‘देशको माया लाग्छ भन्दैमा तिमीहरूले किन यस्तो गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा..
काठमाडाैं, ८ जेठ। हालै ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज भएको अनुष्का शर्माको वेब सिरिज विवादमा फसेको छ । सिरिजलाई बलिउड नायिका अनुष्काले निर्माण गरेकी हुन् । यो सिरिजमा नेपाली महिलाको अपमान हुने गरी भएको ‘तुच्छ गाली’ को दृश्यका विषयमा नायिकालाई ‘लिगल नोटिस’ पठाइएको हो । लिगल नोटिस विशेषतः कानूनी उपचार थाल्नुअघि विपक्षीलाई यसबारे जानकारी दिने हेतुले पठाइने गरिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीका बेला भारतमा निःशुल्क..
काठमाडौं, ८ जेठ । बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई नेपाली कलाकारले साथ दिएका छन् । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा समर्थन गर्दै ट्विट गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले मनिषा कोइरालाको आलोचना गरेपछि नेपाली कलाकारले उनलाई साथ दिएका हुन् । कलाकारहरु रामकृष्ण ढकाल, सत्यराज आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, मनोज गजुरेल, करिष्मा मानन्धर लगायतले मनिषालाई साथ दिएका हुन् । “मनिषा..
आफ्नी प्रेमिकाको कारणले चर्चामा आइरहने रणबिर यसपाली भने आफ्नो बुवा ऋषि कपुरको निधन पस्चात आफ्नो घर नफर्केको र प्रेमिका आलिया को साथ्मा रहेको खबर ले चर्चा पाएको छ । बुवाको निधन पस्चात दिदी रिधिमा भने दिल्ली बाट आएर आमा सँगै बसिरहेकी छन । बिगत केहि समय देखी प्रेममा रहेका यि जोडी बिहे गर्ने निर्णयमा पुगेका थिय तर बुवा ऋषि कपुरको निधन सँगइ हालको..
काठमाडौं, ५ जेठ । अमेरिकन आइडलको उपाधि प्रतिश्पर्धामा रहेका नेपाली गायक दिवेश पोखरेल दोस्रो भएका छन् । यसको उपाधि भने जस्ट सामले जितिन् । नेपाली गायक दिवेश पोख्रेललाई पछि पार्दै उनले सो उपाधि जितेकी हुन् । उपाधि जित्न नसके पनि अन्तिम दुई सम्म आइपुगेका दिवेशले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । यहाँ सम्म आइपुग्नु पनि निकै ठूलो भएको र नेपाल र..
काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाली युवक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप ५ मा प्रवेश गरेका छन् । टप ५ को घोषणासँगै उपाधिका लागि भोटिङ खुल्ला भएको छ । दिवेशले अब उपाधिका लागि फाइनल राउन्डको प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनल राउण्ड पनि सुरु भइसकेको छ । यसमा प्रत्येक प्रतियोगीले दुई–दुई वटा प्रस्तुति दिनेछन् । साथै दुई घन्टासम्म भोटिङ खुल्ला राखिने छ । सबैभन्दा..
काठमाडौं, २९ वेशाख । नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप ७ मा प्रवेश गर्न सफल भएका छन् । आइतबारको प्रस्तुतीमा उनले डिज्नेको ‘लिटल मर्मेड’ को ‘किस द गर्ल’ गीत गाएका थिए । अमेरिकन आइडलको टप ७ सम्म पुग्ने पोखरेल पहिलो नेपाली हुन् । अमेरिकाको प्रख्यात गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको शुरुदेखि नै उनले राम्रो प्रस्तुती दिंदै आएका थिए । टप ७ सम्मको..
काठमाडाैं, १९ वैशाख। रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका एवं प्रजातन्त्र सेनानी रानुदेवी अधिकारीको निधन भएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको गएराति निधन भएको हो । कांग्रेस नेतृ नोना कोइरालाको बहिनीसमेत रहेकी रानुदेवीले निरंकुशता विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कला र सांगीतिक मोर्चामा रहेर काम गरेकी थिइन् । २७ नोभेम्बर १९३६ मा वीरगञ्जमा जन्मिएकी उनको बाल्यकाल भारतकाे बनारसमा बितेकाे थियो । सानैदेखि शास्त्रीय गायनमा सक्रिय रानुदेवीले..
बिहिवार, बैशाख १८, २०७७ साल
मुम्बई, १८ वैशाख। क्यान्सरबाट बलिउडका चर्चित अभिनेता ऋषि कपुरको निधन भएकाे छ । लामाे समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित ऋषि कपुर अस्वस्थ भएपछि बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । साेहि क्रममा ६७ वर्षीय कपुरकाे निधन भएकाे हाे । ऋषि कपुरलाई क्यान्सर र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या रहेकाे भाइ रणधीर कपुरले बताएका छन् । अमेरिकामा करिब एक वर्षसम्म क्यान्सरको उपचार गराएपछि उनी गत वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा भारत..
बुधबार, बैशाख १७, २०७७ साल
बलिउड नायक इरफान खानको ५४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । स्वास्थ्यमा खराबी देखिएपछि उनलाई मुम्बईस्थित कोकिलाबेन धिरुभाई अम्बानी अस्पतालमा मंगलबार पुर्याइएको थियो । जहाँ उनको आइसीयूमा राखेर उपचार गरिदै थियो । भारतीय समाचार माध्यम जुम टिभीले उनको निधन भएको खबर प्रकाशित गरेको हो । इराफान न्यूरोइन्डोक्राइन ट्युमरबाट ग्रसित थिए । लण्डनमा दुई वर्षको उपचारपश्चात् उनी २०१९ मा मुम्बई फिर्ता भएका थिए । पछिल्लो समय..
काठमाडाैं, १७ वैशाख। नायिका पूजा शर्माले यस पटकको जन्मदिनमा आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई मिस गरिरहेकी छिन् । यसअघि उनका शुभचिन्तकहरुले उनको जन्मदिनलाई विशेष बनाएका थिए । तर, यसपटक लकडाउनका कारण उनी घरमै छिन् । जसकारकाण, पूजाले आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई निकै मिस गरेको बताएकी छिन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘प्रेम गीत’मार्फत चर्चामा आएकी यी नायिकाको फ्यान क्रेज गज्जबको छ । पूजा भने आफूले यति धेरै माया..
वीरगञ्ज, ७ वैशाख । पर्सामा राहत सामग्री लुटपाट गरेको आरोमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा विपन्नलाई वितरण गर्न लगिएको राहत सामग्री लुटपाट गरेको आरोमा श्याम कुमार शर्मा, सम्सुल हवारी, चन्द्रकिशोर साह, चन्द्रिका पटेल र दर्शन रायभार पक्राउ परेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वा सुगौली र एकटाङ्गाको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई वीरगञ्जस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय..
काठमाडौं, ७ वैशाख । आज अर्थात वैशाख ७ गते बरिष्ठ हाँस्यकलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको जन्मदिन परेको छ । आइतबार हाँस्यकलाकार मदन कृष्णले आज आफ्नो ७० औं जन्मदिन मनाउदैछन् । उनलाई बिहानै देखि हास्यकलाकारहरिवैश आचार्य लगायत धेरै कलाकारले जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । लकडाउनका कारण घरमै रहेका मदन कृष्णले आज आफ्नो जन्मदिन परिवारसँग मनाउदैछन् । उनले हालसम्म धेरै हास्य टेलिसिरियल र चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका..
नयाँ दिल्ली, ४ वैशाख । बलिउडका बहुचर्चित अभिनेता शाहरुख खान किङ खानका नामले प्रसिद्व छन् । बलिउडमा लामो समय बिताइसकेका शाहरुख पछिल्लो पटक १०० करोड कमाउने अभिनेताहरुको सुचीमा पर्छन् । भारतमा मात्र नभएर विश्वका धेरै देशमा उनका थुप्रै फ्यानहरू छन् । धेरै मानिहरू उनकाे व्यक्तिगत जिवनका बारेमा पनि जान्न चाहान्छन् । किङ खानकाे सम्पती कति हाेला ? याे प्रश्न धेरैले साेचेका हाेलान्..
मुम्बई, २४ चैत । दुई सातादेखि अस्पतालमा भर्ना भएकी गायिका कनिका कपुर साेबमार डिस्चार्ज भएकी छिन् । भारतका लखनउको एसजीपीजीआई अस्पतालमा करिब दुई हप्तादेखि भर्ना भएकी गायिका कपुरलाई आज बिहान अस्पतालबाट छुट्टी दिइएको हाे । कनिका कपुरलाई लखनउको किंग जर्ज मेडिकल विश्वविद्यालयमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि २० मार्चमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । त्यसपछि पीजीआईमा उनको पाँचपटक परीक्षण भयो र सोमबार जब लगातार दुईवटा..
सन् २०१९ मा बलिउडले प्रशंसकलाई थुप्रै आइकोनिक मोमेन्ट दिएका छन् । रणबीर कपुर–विक्की कौशलको चुम्बनदेखि आलिया–कट्रिनाको मिलनसम्म । यहाँ छन् यो वर्षका केही आइकोनिक मोमेन्ट सन् २०१९ को फिल्मफेयर अवार्डमा कट्रिना कैफसँग भेट्दै गरेकी रणबीर कपुरकी अहिलेकी प्रेमिका आलिया भट्ट । सञ्जु फिल्मका आफ्ना को–स्टार विक्की कौशललाई चुम्बन गरिरहेका रणबीर कपुर फिल्मफेयर अवार्डको क्रममा जान्ह्वी कपुर र इशान खट्टर । रणवीर सिंहले श्रीमती दीपिकालाई..
एजेन्सी, ११ चैत । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिले संसार आतंकित भइरहेको छ । सर्वसाधारणका अलावा सेलिब्रिटी पनि यसको चपेटामा परेका छन् । संक्रमित सबैलाई अइसोलेसनमा राखिएको छ । हालै टीभी सो होस्ट एन्डी कोहेनलाई कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएको पाइयो । भारतवंशी एक्ट्रेस इन्दिरा बर्मा पनि कोरोनाबाट ग्रस्त छिन । इन्दिरा बिरामी हुनुभन्दा पहिला एमिलिया क्लार्कसँग काम गरिरहेकी..
बुधबार, चैत्र ५, २०७६ साल
मुम्बई, ५ चैत । काेराेना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएसँगै बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर पनिआइसोलेसनमा बसेकी छिन्। बेलायतबाट फर्किएलगत्तै उनी आइसोलसनमा बस्ने निर्णय गरेकी हुन्। लण्डनबाट फर्किँदै गर्दा समाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामबाट आफू पतिसहित घर फर्किन लागेको सन्देश दिएकी थिइन्। विमानस्थलमा जाँच गरिएको र घर पुगेर परिवारसँगको भेटपछि सोनम दम्पती आइसोलेसनमा बसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यस अघि हिजो मात्रै ९७ वर्षीय अभिनेता दिलिपकुमारले सेल्फ..
काठमाडौं, २ चैत गत नोभेम्बर २५ बाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा आइतबार र सोमबार प्रसारण हुँदै आएको नेपालको पहिलो ‘कमेडी च्याम्पियन’ रियालिटी शो शनिबार साँझ सकिएको छ। नेपालमा कमेडीे क्रेजलाई मध्यनजर गर्दै निर्देशक विशाल भण्डारीले जन्माएको ‘शो’ हो– ‘कमेडी च्याम्पियन’। देशभरबाट आवेदन दिएका करिब १५ सय प्रतिस्पर्धीमध्येबाट आयोजक टिमले १ सय २० सम्भावना बोकेका प्रतिस्पर्धी छनोट गरेको थियो। उक्त १ सय २० ले रियालिटी शोका..
काठमाडौं, २ चैत । नव विवाहित जाेडी आँचल शर्मा र उदिप श्रेष्ठको रिसेप्सनका भिडियो र तस्विर अहिले सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय बनेको छ । जब उदिपले आँचललाई हेलिकप्टर चढाएर हायत पुगेका थिए, चर्चा झन् चुलिएको थियो । आँचल शर्माले लगाएको लेहेंगाको समेत अहिले सामाजिक संजालमा चर्चा बढेको छ । आँचलले लगाएको उक्त लेहेंगा १६ लाख मुल्यको रहेको छ । आँचलले विवाह र..
मुम्बई, २९ फागुन बलिवुडको बहुप्रतिक्षित फिल्म सुर्यबंशी पनि कोरोनाको चपेटामा परेको छ । मार्च २४ मा रिलिज मिति तोकिएको सुर्यबंशीको रिलिज स्थगित भएको निर्मा पक्षले जानकारी गराएको छ । अहिले कोरोनाको संक्रमणको त्रासका कारण सिनेमा हलमा मानिसहरुको संख्या निकै कम भइरहेको बेला फिल्म रिलिज गर्दा ठुलो घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । फिल्मका निर्माता अक्षयकुमार, रोहित शेट्टी, करण जोहर र रिलायन्स इन्टरटेनमेन्टबीच फिल्मको रिलिज..
काठमाडौं, २८ फागुन यो बर्षको इदमा नायक सलमान खान अभिनित चलचित्र ‘राधे’को साथमा अर्का नायक अक्षय कुमारको चलचित्र ‘लक्ष्मी बम’ रिलिज हुँदैछ । तर, यी दुई चलचित्रलाई लिएर अहिलेदेखि नै बलिउड चलचित्रका वितरकहरुविच फोहोरी खेल सुरु भएको छ । यो खेलको केही झलक, चलचित्र ‘बाघी ३’मा पनि देखिएको छ । विशेषगरि, दिल्ली र उत्तर प्रदेशका हल संचालकहरुले यो फोहोरी खेल प्रत्यक्ष भोगेका..
काठमाडौं, २८ फागुन । विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता ‘मिस वर्ल्ड’ नेपालमा हुने सम्भावना छ । मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजकले नेपालमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न सके ऐतिहासिक हुने जनाएका कारण मिस वर्ल्ड–२०२० नेपालमा हुने सम्भना रहेको मिस नेपाल आयोजक संस्था हिडन ट्रेजरले जनाएको छ । हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकरराज राजकर्णिकारका अनुसार अघिल्लो साता नेपाल आएका मिस वर्ल्ड आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष जुलिया मोर्ले र निर्देशक..
काठमाडौं, २५ फागुन पाँच लाख रूपैयाँ ठगी प्रकरणमा मुछिएका नायक अनमोल केसीले स्पष्टिकरण दिएका छन्। चलचित्र ‘धुपौरा’का लागि पाँच लाख रूपैयाँ अग्रिम लिएर काम नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध फिल्म्स नेपाल, जयन श्रेष्ठ इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका तर्फबाट निर्माताद्वय जयन श्रेष्ठ र रुपेश खड्कीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। उक्त आरोपबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् अनमोलले स्पष्टिकरण दिएका हुन्। केहीदिन चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–४’ को छायांकनका क्रममा व्यस्त रहेकाले..
एजेन्सी, २४ फागुन मुकेश अम्बानीकी छोरी इशा अम्बानीले होली पार्टीको आयोजना गरिन्। कार्यक्रममा बलिउड हस्तीहरुको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र उनका पति निकको केमेस्ट्री खुबै जमेको थियो। प्रियंकाले निकसँगको तस्बिर पनि इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेकी छन्। जसमा प्रियंका र निक अबिरमा रंगिएका छन्। अर्को तस्बिरमा भने निक, प्रियंका र कैट्रिना कैफ छन्। उनीहरु खुलेर रंगको पर्व होली मनाएको तस्बिरले बताउँछ। ..
Results 906: You are at page 1 of 31